Tababare Solskjær oo ku fikiraya inuu qaado talaabo uu horey u qaaday Ferguson – Gool FM
Tababare Solskjær oo ku fikiraya inuu qaado talaabo uu horey u qaaday Ferguson
(England) 8 March 2019. Tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjær ayaa shaaca ka qaaday inuu ku fikirayo in Michael Carrick uu markale dib garoomada ku soo celiyo xiliyada soo aadan, kaasoo haatan ah caawiyihiisa koowaad.
Wargeyska “Express” ee dalka England ayaa soo xigtay wareysi uu tababare Ole Gunnar Solskjær kaga hadlay arintan waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan weydiiyay Michael Carrick inta ay la egtahay awooda uu dib ugu soo laaban karo garoomada, maadaama ay kooxda la dhiban tahay dhaawacyo kala duwan”.
“Carrick wuxuu iga ogolaaday arintan, wuxuuna dib ugu soo laabtay tababarka, isla markaana si fiican ayuu kaga soo muuqday”.
“Laakiin ugu dambeyntii waxaan go’aansanay inaan sare u qaadno xidiga da’ada yar James Garner ee aan fursad siino”.
“Carrick wuxuu awood u leeyahay inuu ka qeyb qaato ilaa iyo haatan kulamada qaar”.
Solskjær ayaa sheegay in isku daygii Ferguson ee ahaa inuu Paul Scholes uu dib ugu soo laabto garoomada xilli ciyaareedkii 2012-2013 ee kooxda Manchester United ay ahayd arin cajiib ah.
Manchester United ayaa xusid mudan in xiligan ay la dhibtooneyso dhaawacyo ee dhamaanba boosaska kala duwan ee kooxda, taasoo keento in tababare Solskjær uu ku fikiro dib ugu soo celinta Michael Carrick ee garoomada.
“Hadii ay ku guuleysato Liverpool Premier League, waxba kama badali doonto xanuunka aan dareemayo” - Steven Gerrard